China Factory N'ogbe High arụmọrụ Air Myọcha factory na-emepụta | Chuangqi
1.Echebe engine gị site na ịkwụsị 98% nke ihe egwu egwu engine
2.Ngbochi nke ikuku na-adighi abanye n'ime ntinye ihe ntinye ya na akara di elu
3.Engineered na elu-edu ihe nke na-enweghị ntụpọ ọrụ n'elu dum ọrụ ndụ nke iyo
Emepụtara iji mee ka ịnyịnya na nzaghachi nzaghachi
5.Oout arụmọrụ ọbụna na uzuzu uzuzu ọduọ ọnọdụ
ihe ikuku ikuku
OE Mba. OEM
Asambodo ISO9001 2015
Ihe onwunwe Akwụkwọ na-anọte aka na-adịgide adịgide Akwụkwọ / Nnukwu njupụta na-enweghị akwa
MOQ Mpempe 50
Oge Mbuga ozi N'ime ụbọchị 15 mgbe ị natara nkwụnye ego ahụ.
Ahia , United States, Middle East, Russia, Brazil, Italy, Egypt, Pakistan, Southeast Asia, wdg.
Gini mere eji gbanwee ikuku gi?
Nchedo njin na arụmọrụ kacha elu.
Soot, particulation, pollen na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ịba n’ime igwe ikuku gị mgbe ị na-anya ụgbọala.
Ngwurugwu ndị a nwere ike iduga pistin akara n'ime ụlọ combustion ma si otú a na-emezughị uwe na engine gị. Igwe eletriki dị ka ihe mmetụta dị n'etiti oriri na ụlọ combustion nwere ike mebie ma ọ bụ bibie site na enweghị nzacha.
Ikuku nzacha echebe megide ihe ize ndụ ndị dị otú ahụ na-agbanwe agbanwe mgbe nile na-agbanwe kpam kpam.
Agbanwe arụmọrụ engine. Obere uwe.
Igwe nzacha ikuku sitere na Conqi nke ọma ma nwee ntụkwasị obi na-enyocha ikuku ikuku ma hụ na ọ bụghị naanị ngwakọta nke ikuku na mmanụ ọkụ kachasị mma n'ime ụlọ ọkụ ahụ kamakwa ọ na-arụ ọrụ dị elu site na injin gị.
N'ihi nrụpụta dị elu na ọkwa OEM dị mma, ihe nzacha ikuku sitere na Conqi bụ nke siri ike, ọkachasị siri ike ma nwee ike ijikwa ọbụna nnukwu ọrụ igwe na-enweghị nsogbu - maka arụmọrụ zuru oke na oge mmezi niile.
Ila Filament na-abụghị kpara akwa nyo ákwà, kọmpat Ọdịdị
Nwere ike n'ụzọ dị irè iyo anwụrụ ọkụ isi, pollen, ájá, na-emerụ gas na dị iche iche
Jụ ngwaahịa ndị na-adịchaghị mkpa.
Jiri ngwa ngwa mepụta ngwaahịa buru ibu
Kpoo ya nke oma! Ezigbo nchebe maka injin gị.
Arụ ọrụ pụrụ ịdabere na dum mmezi nkeji
Nchedo kachasị maka engine, igwe ikuku igwe na ihe ndị ọzọ nwere mmetụta
Oke unyi nkewa arụmọrụ na ala eruba-eguzogide
Ogologo oge 100% akara
Nke a bụ nza ị bara uru ịzụrụ.
Tụkwasị na nke a, anyị nwere ike ịnye gị nkwakọ ngwaahịa kachasị ewu ewu na ibipụta akwụkwọ kacha mma zuru oke (Japan, Thailand)
Ka ngwaahịa gị wee zaa ahịa gị
1, anyị nwere ike hazie gị nyo dị ka gị chọrọ.
2, Anyi na-anabatakwa obere iwu.
3, anyị nwere ike na-ere ọkara okokụre ngwaahịa.
4, anyị nwere ike inye akụrụngwa.
Nke gara aga: Pregio PU Ikuku Myọcha katrij OK72C-23-603
Osote: akpaaka akụkụ mmanụ mmanụ 030 115 561AB
Air Myọcha Car Toyota
Air Myọcha Manufactur Machines
Auto ikuku Myọcha
Car Air Myọcha Toyota
Iyo Ikuku Myọcha
Auto ụlọ Air nyo MME61701 MZ341012EX MN185 ...